EXCEL ကိုတစ်ဦးပွိုင့်မယ့်ကော်မာကိုပြောင်းဖို့ကိုဘယ်လို - EXCEL ကို - 2019
Microsoft က Excel ကိုထောက်ပြမှအစားထိုးအမှတ်
အမှတ် - ဒါဟာ separator ဒဿမကော်မာအင်ျဂလိဘာသာဖြင့်သော်လည်း, ကိုအသုံးပြုသည်အဖြစ် Excel ကို၏ရုရှားဘာသာစကား version ကိုသိရသည်။ ဒါကအနုပညာအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောစံချိန်စံညွှန်းများ၏တည်ရှိမှုကြောင့်ဖြစ်သည်။ အမှတ် - ထို့ပြင်, ကနျြောတို့ထောင်ပေါင်းများစွာ separator အဖြစ်ကော်မာထဲမှာလက်ခံခဲ့သည်နှင့်သောအင်္ဂလိပ်စကားပြောနိုင်ငံများရှိ။ အလှည့်မှာတော့ဒီအသုံးပြုသူတစ်မူပြောင်းခြင်းနှင့်အတူအခြားပရိုဂရမ်အတွက် created ဖိုင်တစ်ခုဖွင့်လှစ်သည့်အခါပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဒါဟာမှားယွင်းစွာဆိုင်းဘုတ်များရိပ် မိ. အဖြစ် Excel ကိုပင်, ထိုဖော်မြူလာကိုစဉ်းစားမထားဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုထံသို့မရောက်ရ။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သငျသညျဖြစ်စေသည့် setting တွင်ထို program ၏တည်နေရာကိုပြောင်းလဲသို့မဟုတ်စာရွက်စာတမ်းအတွက်ဇာတ်ကောင်နေရာတွင်အစားထိုးသင့်ပါတယ်။ လျှောက်လွှာအတွက်အမှတ်တစ်ကော်မာကိုပြောင်းဖို့ဘယ်လိုရှာဖွေကြပါစို့။
အစားထိုးပေးဖို့ဆက်လက်မလုပ်ဆောင်ခင်သည်သင်ထုတ်လုပ်ရန်အရာကိုနားလည်ရန်ပထမဦးဆုံးဌာန၌ကိုယျ့ကိုယျကိုအဘို့လိုအပ်ပေသည်။ ဒါဟာပိုကောင်းတဲ့အမြင်အာရုံသီးခြားအဖြစ်မှတ်ရိပ်မိနှင့်တွက်ချက်မှုတွင်ဤနံပါတ်များကိုသုံးစွဲဖို့စီစဉ်ထားကြဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သင်ရိုးရှင်းစွာဒီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖြုန်းမယ်ဆိုရင်ဒါဟာတဦးတည်းအရာပါပဲ။ သငျသညျအနာဂတျမှာစာရွက်စာတမ်း Excel ကို၏အင်္ဂလိပ်ဗားရှင်းလုပ်ငန်းများ၌ပါလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်, အတိအကျတွက်ချက်ဖို့နိမိတ်လက္ခဏာကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်လိုအပ်တယ်ဆိုရင်ဒါဟာအတော်လေးအခြားအရာဖြစ်၏။
Method ကို 1: အဆိုပါ tool ကို "ကိုရှာပါနှင့်အစားထိုးပါ"
ပွိုင့်ဖို့ညှိနှိုင်းမှုအမှတ်ဖျော်ဖြေဖို့အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်း - တစ် tool ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ် "ကိုရှာပါနှင့်အစားထိုးပါ"။ ဒါပေမယ့်တခါကဆဲလ်ရဲ့ contents text format အသို့ကူးပြောင်းပါလိမ့်မည်ကတည်းကထိုကဲ့သို့သောနည်းလမ်းများ၏တွက်ချက်မှုအဘို့, မသင့်တော်ကြောင်းမှတ်သားရပါမည်။
ကျနော်တို့ကမှတ်ကော်မာအဖြစ်ပြောင်းလဲရန်လိုအပ်ပါသည်ရှိရာစာရွက်ပေါ်အထီးကျန်မှုတွေဒေသထုတ်လုပ်။ ညာဘက်မောက်စ်ခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်ရင်။ ဆက်စပ် menu က run ကိုအမှတ်အသားကို item အတွက် "Format ကိုဆဲလ် ... "။ ခွဲခြာသော့ပေါင်းစပ် dial နိုင်ပါတယ်ပြီးနောက်, "ပူသော့" ၏အသုံးပြုမှုကိုမှအခြားရွေးချယ်စရာသုံးစွဲဖို့ပိုနှစ်သက်သူများသည်အသုံးပြုသူများသည် ကို Ctrl + 1.
window ကိုပုံစံချဖြန့်ချိသည်။ ကျနော်တို့ tab ကို၏လှုပ်ရှားမှုထုတ်လုပ်ရန် "နံပါတ်"။ အဆိုပါ parameter သည်အုပ်စုတစ်စု "နံပါတ်ကို formats" ကျနော်တို့ရပ်တည်ချက်ကိုဖို့ရွေးချယ်ရေးရွှေ့ "စာသား"။ သင့်ရဲ့အပြောင်းအလဲများကိုသိမ်းဆည်းရန်ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "အိုကေ"။ ရွေးချယ်ထားသောအကွာအဝေးအတွက် data တွေကို format နဲ့စာပို့ကူးပြောင်းပါလိမ့်မည်။
တဖန်ပစ်မှတ်အကွာအဝေးကိုရွေးပါ။ ပဏာမရွေးချယ်ခြင်းကိုမပါဘဲစာရွက်၏တစ်ခုလုံးကိုဧရိယာ၏အသွင်ကူးပြောင်းမှုအပေါ် လုပ်. , အမြဲတမ်းမလိုအပ်ပါဘူးပါလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်ဤအရေးပါသောအတွက်အသိပေးချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုဒေသတွင်အဆိုပါ tab ကိုရွှေ့ဖို့, မရွေးပြီးတာနဲ့ "အိမ်"။ ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ " 'Find နဲ့ select လုပ်ပါဒီ tool box ထဲမှာနေရာချသော "တည်းဖြတ်ခြင်း" အဆိုပါတိပ်ပေါ်မှာ။ ထိုအခါသင်သည်ရှေးခယျြသငျ့တဲ့သေးငယ်တဲ့ menu ကိုဖွင့်လှစ် "ကိုပြောင်း ... ".
ထို့နောက် tool ကို run "ကိုရှာပါနှင့်အစားထိုးပါ" tab ကို "အစားထိုး"။ လယ်ပြင်၌ "ကိုရှာပါ" set ကိုအမှတ်အသား ","လယ်ပြင်၌နေစဉ် "အစားထိုး" - "."။ ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "အားလုံးအစားထိုး".
အဆိုပါဖျော်ဖြေအသွင်ပြောင်းအပေါ်တစ်ဦးအစီရင်ခံစာထောက်ပံ့ထားတဲ့အတွက်သတင်းအချက်အလက်ပြတင်းပေါက်ဖွင့်လှစ်။ ခလုတ်ကိုအပေါ်တစ်ဦးကလစ်လုပ်ပါ "အိုကေ".
အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုရွေးချယ်ထားအကွာအဝေးအတွင်းရှိအချက်များအတွက်ကော်မာရဲ့အသွင်ကူးပြောင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုထွက်သယ်ဆောင်။ ဒီမှာဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းစဉ်းစားနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဒီအလမ်းအတွက်အစားထိုးဒေတာစာသားကို format နဲ့ဖွစျလိမျ့မညျကိုထိုအခါသတိရသင့်သည်နှင့်ထိုကြောင့်, တွက်ချက်မှုများတွင်အသုံးပြုရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
သင်ခန်းစာ: Excel ကိုအတွက်ဇာတ်ကောင်အစားထိုး
Method ကို 2: application ကို function ကို
ဒုတိယနည်းလမ်းတခုအော်ပရေတာများအသုံးပြုခြင်းကပါဝင်ပတ်သက် အစားထိုး။ သီးခြားတီးဝိုင်းအတွက် data တွေကိုပြောင်းလဲဖို့ဒီ function ကိုနှင့်အတူစတင်, အဲဒီနောက်ကနဦးတည်နေရာမှသူတို့ကိုကူးယူရန်။
ကော်မာတစ်ဦးပွိုင့်အသွင်ပြောင်းရပါမည်ကျသော, ပထမဦးဆုံးဆဲလ်အကွာအဝေးအချက်အလက်များ၏ရှေ့မှောက်၌တစ်ဦးအချည်းနှီးသောကလာပ်စည်းကိုရွေးပါ။ အိုင်ကွန်ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ "Insert ရာထူးအမည်"ယင်းပုံသေနည်းဘား၏လက်ဝဲဘက်အပေါ်တင်လိုက်တယ်။
ဤအလုပ်ရပ်များရာထူးအမည် Wizard ကိုဖြန့်ချိလိမ့်မည်ပြီးနောက်။ ငါတို့သည်ဤကဏ္ဍကိုရှာဖွေနေကြသည် "စာမေးပွဲ" သို့မဟုတ် "တစ်ဦးကအပြည့်အဝအက္ခရာစဉ်စာရင်း" နာမတျောကို "အစားထိုး"။ ဒါကြောင့်ကို Select လုပ်ပါနှင့် button ကို click "အိုကေ".
ဒါဟာပြတင်းပေါက် function ကိုငြင်းခုံဖွင့်လှစ်။ ဒါဟာသုံးလိုအပ်သောအငြင်းပွားမှုများရှိပါတယ် "စာသား", "ဟောငျးစာသားကို" နှင့် "အသစ်ကစာသား"။ လယ်ပြင်၌ "စာသား" သင် posted data တွေကိုပြောင်းလဲသွားစေခြင်းငှါအဘယ်မှာရှိဆဲလ်များ၏လိပ်စာသတ်မှတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, ဒီလယ်ကွင်းဖို့ cursor set ထို့နောက် variable ကိုအကွာအဝေး၏ပထမဦးဆုံးဆဲလ်အပေါ်စာရွက်ပေါ်တွင်နှိပ်လိုက်။ ထိုခဏခြင်းတွင်ပြုလုပ်ပြီးနောက်, လိပ်စာအငြင်းပွားမှုများ box ထဲမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်။ လယ်ပြင်၌ "ဟောငျးစာသားကို" ကျနော်တို့လာမယ့်ဇာတ်ကောင် set - ","။ လယ်ပြင်၌ "အသစ်ကစာသား" Dotting - "."။ ဒေတာကိုဖန်ဆင်းထားပြီးပြီးနောက်ခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ် "အိုကေ".
သင်တို့ကိုတွေ့မြင်နိုင်သကဲ့သို့, ပြောင်းလဲခြင်းကိုပထမဦးဆုံးဆဲလ်များအတွက်အောင်မြင်ခဲ့သည်။ ထိုသို့သောစစ်ဆင်ရေးတစ်ခုလိုချင်သောအကွာအဝေးအပေါငျးတို့သညျအခွားဆဲလ်များအတွက်ထွက်သယ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ကောင်းပြီ, ဒီနည်းနည်းတီးဝိုင်းပါလျှင်။ သို့သော်လည်းအဘယ်သို့လျှင်ဆဲလ်တစ်ဗဟု၏ရေးစပ်သလဲ? ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, ဤနည်းအတွက်အသွင်ပြောင်း, ဤကိစ္စတွင်အတွက်အချိန်ကြီးမားတဲ့ငွေပမာဏကိုယူပါလိမ့်မယ်။ သို့သော်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအလွန်ပုံသေနည်းကူးယူခြင်းဖြင့်အရှိန်ရနိုင် အစားထိုး အမှတ်အသားဖြည့်သည်။
function ကိုပါဝင်သောဆဲလ်၏အောက်ဆုံးညာဘက်အစွန်းဖို့ cursor ကိုသတ်မှတ်ပေးသည်။ ဒါဟာအသေးလက်ဝါးကပ်တိုင်ပုံစံအတွက်ဝစွာလက်ကိုင်ပုံပေါ်ပါတယ်။ လက်ဝဲ mouse ကိုခလုတ် Hold နှငျ့သငျအချက်ထဲမှာကော်မာအဖြစ်ပြောင်းလဲချင်သောလယ်ပြင်လက်ဝါးကပ်တိုင်အပြိုင်ဆွဲယူပါ။
သငျသညျမွငျနိုငျသကဲ့သို့, ပစ်မှတ်အကွာအဝေး၏တစ်ခုလုံးကို contents တွေကို data တွေကိုမှတ်အစားကော်မာသို့ကူးပြောင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆိုရင်သင်အရင်းအမြစ်ဧရိယာ၌ရလဒ် copy နဲ့ paste ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ပုံသေနည်းတွေနဲ့ဆဲလ်တွေကိုရွေးချယ်ပါ။ tab ကိုစဉ်တွင် "အိမ်", ထိုဖဲကြိုးအပေါ်ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Copy ကူး"အဆိုပါတူရိယာသီးပြွတ်၌တည်ရှိသည်ဘယ်ဟာ "Clipboard"။ ဒါဟာပိုမိုလွယ်ကူစေနိုင်ပြီး, ကအကွာအဝေးရွေးချယ်ရေးဖုန်းခေါ်ဆိုမှု hotkey ပြီးနောက်ခဲ့သည် ကို Ctrl + 1.
အရင်းအမြစ်အကွာအဝေးကိုရွေးချယ်ပါ။ ညာဘက်မောက်စ်ခလုတ်ကိုများ၏ခွဲဝေပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ။ တစ်ဦးက Context Menu ကပေါ်လာသည်။ ဒါဟာကို item ကိုနှိပ်လိုက်ရင် "တန်ဖိုးများ"အုပ်စုတစုမှာတည်ရှိပါတယ်သော "Paste Options ကို"။ ဤအကြောင်းအရာသည်နံပါတ်များကိုသတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ် "123".
ဤအခြေလှမ်းများပြီးနောက်တန်ဖိုးသင့်လျော်သောအကွာအဝေးသို့ထည့်သွင်းပါလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်ကော်မာအချက်များအသွင်ပြောင်းနေကြသည်။ ဖယ်ရှားပစ်ရန်မရှိတော့ဖော်မြူလာနှင့်ပြည့်စုံဧရိယာဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုလိုခငျြ, က select လုပ်ပါနှင့်လက်ျာ mouse ကိုခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ ပေါ်လာသော menu ကထဲမှာ, select လုပ်ပါ "Clear ကိုအကြောင်းအရာ".
Method ကို 3: နိုင်တဲ့ macro ကိုသုံးပါ
ဘာလို့လဲဆိုတော့ Micro စနစ်နဲ့အခြားသော၏အသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်အသုံးအနှုန်းများအတွက်လာမယ့်အသွင်ပြောင်းနည်းလမ်းကော်မာ။ ဒါပေမယ့်အမှု Excel ကိုအတွက်ဘာလို့လဲဆိုတော့ Micro စနစ်နဲ့အခြားသော default အနေနဲ့ကပိတ်ထားသည်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဆဲဖြစ်ပါတယ်။
လူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးစွာသင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ Micro စနစ်နဲ့အခြားသော enable အဖြစ်နဲ့ tab ကိုသက်ဝင်သင့်တယ် "ရေးသားသူ"သင့်ရဲ့အစီအစဉ်တွင်လျှင်, သူတို့သည်သေး activated ကြပြီမဟုတ်။ ထိုအခါသင်သည်အောက်ပါလုပ်ဆောင်ချက်များဖို့လိုအပ်:
အဆိုပါ tab ကို Moving "ရေးသားသူ" နှင့် button ကို click "Visual Basic"ဒီ tool box ထဲမှာနေရာချသော "Code ကို" အဆိုပါတိပ်ပေါ်မှာ။
အဆိုပါနိုင်တဲ့ macro အယ်ဒီတာဖွင့်လှစ်။ အထဲတွင် INSERT အောက်ပါကုဒ်:
sub Makros_transformatsii_zapyatyh_v_tochki ()
Selection.Replace ကဘာလဲ: = ",", အစားထိုး: "။ " =
ထို့နောက်အသွင်ပြောင်းစေသည့်အတွက်အကွာအဝေးကိုရွေးပါ။ ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "macro"တူညီသော tool ကိုအုပ်စုနေဆဲဘယ်ဖြစ်ပါသည် "Code ကို".
တစ်ဦးကပြတင်းပေါက်ကမျြးစာ၌ရရှိနိုင်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့ Micro စနစ်နဲ့အခြားသောများ၏စာရင်းကိုနှင့်အတူဖွင့်လှစ်။ မကြာသေးမီကအယ်ဒီတာအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးသောတဦးတည်းကိုရွေးချယ်ပါ။ ၎င်း၏အမည်ကိုနှင့်အညီဖော်ထုတ်ပြီးတာနဲ့ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Run ကို".
သင်ခန်းစာ: ဘယ်လို Excel ကိုတစ်နိုင်တဲ့ macro ကိုဖန်တီးရန်
Method ကို 4: Excel ကိုချိန်ညှိမှုများ
အောက်ပါနည်းလမ်းကျသောထို program ၏အရေအတွက်ကိုအဖြစ်ထက်စာသားကိုအဖြစ်ကိုရိပ်မိခံရဖို့တစ်အချက်၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးအတွက်ကော်မာပြောင်းလဲများ၏ခြေလှမ်း, အထက်ပါတို့တွင်သာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ကျနော်တို့ separator ပွဲချင်းပြီးထောက်ပြပြင်ဆင်ပြီးဖြစ်ပါသည်စနစ်ကိုပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
tab ကိုစဉ်တွင် "File", ထိုနာမကိုအမှီပိတ်ပင်တားဆီးမှုပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ "န့်သတ်ချက်များ".
ပုဒ်မခွဲအတွက်ရွှေ့နိုင်အောင် Properties window ထဲမှာ "အဆင့်မြင့်"။ ကျနော်တို့ရှာဖွေရေး setting များကိုပိတ်ပင်တားဆီးမှုအောင် "န့်သတ်ချက်များအပြောင်းအလဲများ"။ တန်ဖိုးန်းကျင် box ကိုဖယ်ရှားပါ "စနစ်အားထည့်ထားသုံးပါ"။ ထို့နောက်ခြေလှမ်းအတွက် "ခြားကိန်းနှင့်ဒဿမကိန်းအစိတ်အပိုင်းများကို" ကျနော်တို့နှင့်အတူအစားထိုးပါစေ "," အပေါ် "."။ သတ်မှတ်ချက်များ၏နိဒါန်းများအတွက် button ကို click "အိုကေ".
အပိုင်းကိန်းကိုသီးခြားစီမှတ်သို့ကူးပြောင်းနေကြသည်အဖြစ်အသုံးပြုလျက်ရှိသောအထက်ပါလုပ်ရပ်များကော်မာ, ပြီးနောက်။ ဒါပေမယ့်ပိုပြီးအရေးကြီးတာကသူတို့အသုံးပြုကြသည်သောစည်းကမ်းချက်များ, ဂဏန်းဆက်ရှိနေပါလိမ့်မယ်, နှင့်စာပို့ကူးပြောင်းမည်မဟုတ်ပါ။
တစ်ဦး Excel ကိုစာရွက်စာတမ်းထောက်ပြဖို့ကော်မာအဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့နည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ်။ အဲဒီ options အများစုမှာဂဏန်းစာသားကိုပေါ်မှ data တွေကို format နဲ့ပြောင်းလဲနေတဲ့ပါဝငျသညျ။ ဒါဟာအစီအစဉ်တွက်ချက်မှုတွင်ဤအသုံးအနှုန်းတွေမသုံးနိုငျသောအမှန်စင်စစ်စေပါတယ်။ သို့သော်မူရင်းပုံစံချပေးထိန်းသိမ်းနေချိန်တွင်ကော်မာ၏စည်းကမ်းချက်များ၌တစ်ဦးအသွင်ပြောင်း generate တစ်လမ်းလည်းရှိပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့အစီအစဉ်ကို၏ setting ကိုပြောင်းလဲရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
ဗီဒီယို Watch: Top 15 Advanced Excel 2016 Tips and Tricks (အောက်တိုဘာလ 2019).